Janan oo la geeyay Muqdisho iyo Farmaajo oo la balansan | KEYDMEDIA ONLINE
Janan oo la geeyay Muqdisho iyo Farmaajo oo la balansan
Janan ayaa lagu eedeeyay dembiyo waaweyn inuu ka galay shacabka Gedo, oo xasuuq u geystay intii u dhaxaysay 2014-2015.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa Muqdisho galabta soo gaarey Janan oo laga soo qaaday magaaladda Doolow, ee gobolka Gedo oo shalay iska soo dhiibay isagoo wata 400 oo askari, oo dhanka Jubbaland kasoo goostay.
Waxaa la socday Janan C/raxmaan Dheere oo ah nin ay qaraabo yihiin Fahad Yaasiin kaasoo ku magacaaban Wasiiru dowlaha Gaadiidka iyo Al-Cadaala oo ah wasiirk ku xigeenka Warfaafinta, iyadoo Fahad oo saarnaa diyaarada ka dhuuntay Kaamiradda.
Janan waxaa lagu wadaa inuu Farmaajo la kulmo, kahor inta uusan dalka Turkiga u ambabaxay, waxaana akoon loogu shubay 2.3 milyan oo dollar maadaama uu kala soo goostay Axmed Madoobe hub iyo Ciidan badan.
Shacabka Gedo ayaa u arkay Janan demibiilo xasuuq u geystay 2014 ilala 2015, isagoo horaantii sanadkan hoobiyeyaal uu ku garaacay Beled-Xaawo ay ku dhintaay 11 qof oo shacab ah, oo ay kamid ahaayeen 5 caruur ah oo jal qoys kasoo jeeda.
Janan wuxuu ahaa dagaal ooge Axmed Madoobe uu Wasiir ka dhigay, una adeegsaday inuu ku xasuuqo dadkiisa ku nool gobolka Gedo. [Halkan ka akhri warbixin].